Tusaha kalgalka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Xirsi Faarax — June 13, 2020
Tusaha kalgalka waa Tuse ay ku habaysan yihiin curiyayaasha kiimikeed, kuwaas oo u urursan tiro-atam, ratibaad elektaroon iyo astaamo kiimikeedkooda. Qaabka tusuhu waxa uu muujinayaa kalgal isbedelka curiyayaasha.
Todobada safe e tusaha waxaa loogu yeeraa “kal”, siguud dhinaca bidix waxaa uga jira biraha ah dhinaca midigna waxa uga jira curiyayaasha bir ma-ahe ah. Joog-u-taxa tusaha waxaa loogu yeeraa “ururro” kuwaas oo ururkasta ka kooban tahay curiyayaal leh dabeecad kiimikeed isku mid ah. Ururadu waxa ay leeyihiin magacyo ugaarah, sida curiyayaasha ururka 17aad waxaa looguyeeraa halajiino halka curiyayaasha ururka 18aadna loogu yeero neefaha wahsada.
Marka la joogo kimisteriga, curiye waa nooc atam oo leh tiro borotoono isku mid ah gudaha bu’ atamkiisa (taasina waxa ay la mid tahay tiro atamkiisa). Tusaale, tiro atamka curiyaha oksijiin waa 8, taas oo ka dhigan ama qeexaysa curiyaha oksijiin in atamyadiisa dhamaan ay leeyihiin 8 borotoon.
Inta la xaqiiiyey dhamaan curiyayaashu waa 118 curiye, oo 94ta ugu horeysa (kabilow haydarojiin ilaa platoniyom) waa dabiici dhulka ayaana laga helaa. Halka 24ta soo hartayna ay yihiin kuwo aan dabiici ahayn oo hab kiimikeedka lagu sameeyey.
sidoo kale, curiyayaashaas 80 kamid ah waa curiyayaal nagi oo leh hal isotob, 38da curiye ee soo hartay waa curiyayaal kaahfale ah kuwaas oo mataraaraxa marka ay wakhti joogan iskuna badala curiyayaal kale.
Curiyaha xadiidka waa curiyaha ugu badan (culays ahaan) ee dhulku ka samaysan yahay ama ka kooban yahay halka curiyaha oksijiin uu yahay curiyaha ugu badan ee laga helo oogada sare ee dhulka.
Curiyahaasha kiimikeed waxa ay ku jiraan dhamaan maatarka nagu xeeran oo dhan. Erayga “curiye” waxaa loo isticmaalaa atamyada leh tiro atam layaqaan, sidaas oo kale walxaha kiimikeed ee saafida ah waxa ay ka samaysan yihiin hal curiye oo kaliya (tusaale, gaaska haydarojiin).
Tags: Tusaha kalgalka
Next post Howgallada Farsamo ee Gaarka ah (Special Tactical Operations)
Previous post Walxaha kiimikeed ee saafida ah iyo kuwa aan saafida ahayn